भाजपाको योजना : ‘नेपालमा अनुकूल सरकार छ, यहीबेला संगठन बिस्तार गर्नुपर्छ’
काठमाडौं। भारतको दक्षिणपन्थी भाजपाले आफ्नो संगठन के नेपालसम्म विस्तार गर्न खोजिरहेको छ ? आफ्नो देशलाई हिन्दू र अल्पसंख्यकमा विभाजित गरेर शासन गरिरहेका नरेन्द्र मोदी यो संक्रमण के छिमेकमा पनि विस्तार गर्न चाहन्छन् ? त्रिपुराका मुख्यमन्त्री विप्लव देवले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई उद्धृत गर्दै नेपालको विषयमा बोलेको विषयले धर्मनिरपेक्ष नेपाललाई चिन्तित बनाएको छ।
विप्लव देवमार्फत सार्वजनिक भएको अमित शाहको भनाइ किन पनि गम्भीर छ भने भाजपाको विचारधारात्मक माउ संस्था हिन्दू स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले नेपालमा अहिले आफ्ना कार्यक्रम तीव्र बनाएको छ। यता, कोभिड महामारीका वेला एउटा पनि भेन्टिलेटर किन्न कञ्जुस्याइँ गरेको तथा खोपका लागि चन्दा उठाइरहेको सरकारले अहिले पशुपतिको शिवलिंगमा भने एक सय ४१ किलो सुनको जलारी चढाउने निर्णय यही वेला गरेको छ।
त्रिपुराका मुख्यमन्त्री विप्लव देवले सन् २०१८ मा भाजपाका तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह त्रिपुरा भ्रमणमा आउँदाको प्रसंग सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले भने, ‘अमित शाह त्रिपुरा आउनुभएको थियो, हामी स्टेट गेस्टहाउसमा उहाँसँग कुरा गर्दै थियौँ। (भाजपा महासचिव) अजय जमवालले भारतका सबैजसो राज्यमा सरकार बनाएको प्रसंग उठाउनुभयो। जवाफमा अमित शाहले भन्नुभयो– श्रीलंका र नेपालमा सरकार बनाउन अझै बाँकी छ। हाम्रो पार्टीलाई श्रीलंका र नेपालमा बिस्तार गर्नुपर्छ र त्यहाँ पनि सरकार बनाउनुपर्छ।’
नेपालमा पनि संगठन विस्तार गर्नुपर्छ भनेर अमित शाहले भनेका हुन् भने पनि उनको बोली निरर्थक होइन। किनकि पछिल्ला दिनमा नेपालमा हिन्दू स्वयंसेवक संघको ब्यानरमा कार्यक्रम तीव्र भएका छन्। भारतमा पनि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)कै नेतृत्वमा संगठित रूपमा हिन्दूधर्म प्रचार हुँदै आएको छ। स्वयं नरेन्द्र मोदी पनि आरएसएसमा हुर्किएका धर्म प्रचारक हुन्। आफ्नो धर्म प्रचार गर्नेभन्दा पनि अल्पसंख्यकविरुद्ध घृणा फैलाएर शक्ति हत्याउने र सत्तामा टिकिराख्ने रणनीतिका कारण विश्वभरका उदारवादीहरूले मोदीको आलोचना गर्दै आएका छन्।
हिन्दू स्वयंसेवक संघ नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलन २४ माघमा वीरगंजमा भएको थियो। सम्मेलनको उद्घाटन संघका राष्ट्रिय सह–सञ्चालक एवं पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक कल्याण तिमिल्सिनाले गरेका थिए। कार्यक्रममा उनल उनले देशमा हिन्दूलाई विभिन्न धर्म परिवर्तन गराएर हिन्दूत्वको संस्कृतिलाई केही तत्वले ओझेलमा पार्ने काम गरेकोले सावधान हुन अपिल गरेका थिए। उद्घाटनपछि हिन्दू स्वयंसेवकहरूले बाजागाजासहित वीरगञ्जमा मार्चपास गरेका थिए।
अमित शाह र विप्लवदेवको विवादास्पद भनाइबारे नेपाली र भारतीय सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि सोमबार दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग चासो राखेको छ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल र भुटान डेस्क हेर्ने उत्तरी डिभिजनका सहसचिव अरिन्दम बाग्चीसँग यसबारे चासो राखेका छा्। कूटनीतिक स्रोतका अनुसार भारत सरकारका बहालवाला गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई नेपालले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै स्पष्ट पार्न राजदूत आचार्यले आग्रह गरेका थिए। यसबारे आचार्यले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि जानकारी गराइसकेका छन्।
‘भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले गृहमन्त्रीबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति नआएको र भारत सरकारले त्यस्तो सोच्न पनि सक्दैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्, सार्वजनिक रूपमा पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले यसबारे प्रतिक्रिया दिने सम्भावनाा छ,’ कूटनीतिक स्रोतले भन्यो। दिल्लीस्थित श्रीलंकाली दूतावासले पनि यसबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग चासो राखेको छ।
त्रिपुरास्थित सिपिआइएमका नेता तथा पूर्वसांसद जितेन्द्र चौधरीले टिप्पणी गरेका छन्, ‘मुख्यमन्त्री देवमा संविधान, लोकतन्त्र र संवैधानिक क्षेत्राधिकारबारे ज्ञान रहेनछ। अमित शाहले नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकामा सरकार गठन गर्ने मिसन छ भनेर बोलेको विषयमा मुख्यमन्त्रीले वक्तव्य दिएछन्। यसको अर्थ उनीहरूले अर्को देशको मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेका छन्।’
चौधरीले भनेका छन्, ‘वर्तमान गृहमन्त्री अमित शाहले नेपालविरुद्ध यो प्रान्तमा षड्यन्त्र गरेका छन्। भाजपाले यसबारे जवाफ दिनुपर्छ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै यस विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।’ गृहमन्त्री शाह स्वयंले यसबारे जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नयाँपत्रिका दैनिक लेख्छ – त्रिपुरा राज्यका कंग्रेस उपाध्यक्ष तापस देईले भारत साम्राज्यवादमा विश्वास नगर्ने बताएका छन्। ‘त्रिपुराका मुख्यमन्त्री साम्राज्यवादका सहयोगी हुनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेपाल र श्रीलंका दुवै सार्वभौम देश हुन् र हामी उनीहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप वा केही गर्न सक्दैनौँ,’ देइले भनेका छन्।
त्रिपुराका मुख्यमन्त्री देवले यसअघि भारतमै दिएका विवादास्पद अभिव्यक्ति अझै चर्चामा छन्। उनले केही वर्षअघि इन्टरनेट र भूउपग्रह महाभारतकै समयदेखि अस्तित्वमा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले लोकसेवा आयोग (सिभिल सर्भिस एक्जामिनेसन) सिभिल इन्जिनियरहरू मात्रै सहभागी हुनुपर्ने पनि बताएका थिए। देवको नेतृत्वमा भारतमा कम्युनिस्टहरूको गढ मानिने त्रिपुरा राज्यमा तीन वर्षअघि भारतीय जनता पार्टीले बहुमत हासिल गरेको थियो।
ओलीसँग सहकार्य हुँदैन, हामी वैज्ञानिक समाजवादमा दृढ छौं : प्रकाण्ड
पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउन चिठी लेख्दै निर्वाचन आयोग
संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्तिसँग डिभोर्स गरेर म्याकेन्जीले गरिन् शिक्षकसँग बिहे
एप्रिलिया एसएक्सआर १६० नेपाली बजारमा
शेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहने महिलाको लागी नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडको छुट
विप्लव नेकपाको हतियार खोइ ? : योगेश भट्टराई
नारायणगढ–मुग्लिङ सडक दिउँसोमा साढे ४ घण्टा बन्द हुने
शंकर पोखरेलको नजरमा यी हुन् ओलीका दूरगामी महत्त्व राख्ने १९ काम
केपी ओली सडकमा पछारिने दिन धेरै टाढा छैन : नेपाल
थानकोट डिपोको स्तरोन्नति गर्दै आयल निगम